တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: June 2007
ဒီရက်ပိုင်းရဲ့ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ဆိုးဝါးပုံကတော့ ပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဘလော့မှာစာတပုဒ် တင်ဖို့အရေး နာရီနဲ့ချီပြီး ကြာအောင်စောင့်ရတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေ နေမကောင်းလို့ အမေ့နားစောင့်ပေးရ၊ သူငယ်ချင်း ဆေးရုံတက်နေရလို့ နေ့စဉ် သွားကြည့်ပေးရ အဖေစာသင်ဖို့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြင်ဆင်ပေးရ … ကိုယ်ပိုင်အချိန် တော်တော်လေးကို ပါးရှားနေလို့ စာလည်း ဟုတ္တိ ပတ္တိ မရေးဖြစ် နိုင်တဲ့အပြင် တခြားဘလော့တွေလည်း အချိန်ပေးပြီး သေချာမဖတ်နိုင်ပါဘူး။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် စီဘောက်စ်လေးတွေမှာသာ ပြောခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်မန့် ကိုလည်း ဆရာမ မမေငြိမ်းနဲ့ ညီမလေးဆိုးဝှက်ရဲ့ ဘလော့ နှစ်ခုပဲ ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကို ရေးဖို့တောင် တညနဲ့ တမနက် အချိန်ပေးရပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်ဆိုးပုံ များ။ နဂိုကမှ စိတ်မရှည်တာမို့ တော်တော်လေး သည်းခံရပါ တယ်။
စိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိလို့ စာမရေးဖြစ်ချိန်မှာ အချိန်ရသလောက် သူများစာတွေ ရိုက်ပြီးသာ တင်နေရတယ်။ စိတ်ထဲက သိပ်တော့ မကောင်းလှပါဘူး။ ဒီနေ့လည်း ကျမ မအားလို့ “အကြံပါး နဂါးဆားချက်” လိုက်ပါဦးမယ်။ မနေ့က ပို့စ်မှာ ကမ္ဘာကြီး သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခါနီး မီဒီယာအသီးသီးက ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ ရေးသားကြတဲ့ပုံစံကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေသာဆိုရင် ဘယ်လို များ ရေးသားမလဲ သိချင်ပါဘိလို့ ကျမက အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ရောက်လာတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရေးပြီးသူများကို လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။
ကျမကို ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ … ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတဲ့ သူများ (ဘလော့ဂါ ဟုတ်သည် ဖြစ်စေ မဟုတ်သည် ဖြစ်စေ) ဘယ်လိုများ ရေးချင်ပါသလဲလို့ … ကွန်မန့်လေးတွေ ပေးခဲ့ စေချင်ပါတယ်ရှင်။ ကွန်မန့်တွေကို ပို့စ်ပေါ် ပြန်တင်ပေးသွားပါမယ်။ (ဂျစ်တူး စတိုင်ပေါ့)
သူတို့တွေ ဘယ်လိုရေးထားတယ်ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး … ။
ဒုတိယ ဟာသက သတင်းကို ပန်ဒိုရာ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဆိုရင်လား.. ဒီလိုရေးမယ်။
“မျှော်လင့်ချက်တွေကို ထမင်းအိုးညှိလိုက်ကြပြီ..”း)
6/28/2007 2:24 PM
ညီမလေးကတော့ ဒီသတင်းကို ညီမဘလော့ဂ်မှာ "၀ိပဿနာတရား အားထုတ်ကြပါစို့" လို့ ရေးမယ်...ဟဲ...
6/28/2007 2:31 PM
“ချစ်တဲ့သူတွေ အားလုံး တူတူရှိနေကြဖို့ အရေးကြီးပြီ…” လို့ ရေးမှာပေါ့..ဟဲဟဲ။
ကျနော်ဆိုရင်တော့ “ကမ္ဘာပျက်ရင် စစ်တပ်လည်း ပါတယ်” လို့ ရေးမယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ “တိုင်းပြည်ပျက်ရင် စစ်တပ်လည်း ပါတယ်” လို့ ဦးလွင် ပြောခဲ့ဘူးတာ စိတ်ထဲစွဲနေလို့။
6/29/2007 3:27 AM
Moe Htet said...
This is my heading:
6/29/2007 10:53 AM
ရပြီးသလောက် ကတော့ ဒီမျှပါပဲ … ။
ဒါက နောက်ဆက်တွဲ တွေပါ ...
“လမ်းတခုရဲ့ အဆုံးသတ်” လို့ ရေးမိမယ်ထင်တယ်။
6/29/2007 6:05 PM
“ကမ္ဘာပျက်တော့မည် ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် ကုန်ဈေးနှုံး ကျဆင်းလားခြင်း”
6/29/2007 6:38 PM
မမေရေ.. ညီမဘလောဂ့်မှာဆိုရင်.. ဒုတိယဟာသကို..
“ငါတို့အပိုင်းအစများကြွေကျမည့်နေ့” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်မယ် ။
6/29/2007 8:48 PM
To Day is EXPIRY-DATE of Oh.. My Blog! Wow! ANNATA Rock. ..ဟီး.
6/30/2007 9:20 PM
ခင်မင်းဇော် has leftanew comment on your post "ဖတ်ခဲ့မိတဲ့ ရယ်စရာ":
အမကတော့ “မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ စတင်ရန်အချိန်ကျပြီ” လို့ ရေးမယ်။ ဟဲဟဲ
Posted by ခင်မင်းဇော် toတွေးမိတွေးရာ ..ရေးမိရေးရာ at 6/30/2007 9:49 PM
ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ "ဒိုးရတော့မယ် အချစ်ရယ် အာဟ အာဟ" လို့ရေးမယ်။
7/01/2007 3:40 AM
"ငါတို့တတွေ လွတ်လပ်ချိန် ရောက်တော့မည်" လို့ရေးချင်တယ်
ကျမကို ကူညီပြီး ရေးပေးကြသူအားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျမလည်း ဘယ်လိုရေးရမလဲ စဉ်းစားနေတာ … ။ အခုတော့ စဉ်းစားလို့ရပြီ .. ။
“နေ နှင့် လ တို့ ခွဲခွါချိန်” … လို့
7/03/2007 8:44 PM
7/04/2007 2:31 AM
"Que ser'a, ser'a
7/08/2007 3:51 PM
၂၉၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
ညနေ ၃ နာရီ
Posted by မေဓာဝီ at 9:26 AM6comments
ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ဟာသမဂ္ဂဇင်းတစောင် ကောက်လှန်တော့ ဂျာနယ်လစ်လောက ဟဒယဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဟာသ လေးငါးခြောက်ပုဒ်ကို ဖတ်မိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကျမနှစ်သက်တဲ့ ဟာသ ၂-ပုဒ်ကို ပြန်လည်ဝေငှရယ်ကြရအောင် ပျင်းရိတဲ့ကြားက အားတင်းပြီး ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တချို့သူတွေရေးသလို အတုခိုးပြီး “ကျမအကြိုက်”ဆိုပြီး တင်ရကောင်းမလား စဉ်းစားပါသေးတယ်။ တော်ကြာ ကော်ပီရိုက်နဲ့ ငြိမှာစိုးလို့ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်တာ။ ဒီစာကို တင်ရခြင်းကတော့ ဒီနေ့အတွက် ရေးစရာ ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်နဲ့ မစဉ်းစားချင်တာ က တကြောင်း၊ ဘလော့ဂါတွေထဲ ဂျာနယ်လစ်တချို့လည်း ပါနေတာဆိုတော့ ဒီဟာသလေးတွေဖတ်ပြီး အတုယူချင် ယူရလေအောင် ဖော်ပြချင်တာက တကြောင်း … ဆိုပါတော့။ တချို့လည်း ဖတ်ဖူးပြီးသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ …ပေါ့လေ … ။
ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ခေတ်ဟောင်းက မော်စကိုမြို့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်တစ်ခုရှေ့တွင် ဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်ထံမှ လွတ်ထွက်လာသော အယ်ဇေးရှင်း ခွေးကြီးတစ်ကောင်က ကလေးငယ်တဦးအား ကိုက်ခဲမည်ပြုစဉ် လူရွယ်တစ်ဦးက ပြေးဝင်လာပြီး ခွေးလည်ပင်းကို ကရာတေးလက်ဝါးစောင်းဖြင့် ခုတ်ရိုက်သတ်၍ ကလေးငယ်ကို ကယ်တင်လိုက်လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် အံ့အားသင့်နေသော လူအုပ်ထဲမှ သတင်းထောက်တစ်ဦး ပြေးထွက်လာပြီး …
ထောက်။ … ။ “သိပ်တော်တာပဲဗျာ၊ ကျွန်တော် ‘ပရာပဒါ’ သတင်းစာက သတင်းထောက်တစ်ယောက်ပါ။ ဒီသတင်းကို ဒီလိုခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်မယ်နော်” ဟု ပြောပြီး …
“ကွန်မြူနစ်ကေဒါတစ်ဦးက ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ခွေးဆိုးကြီးလက်မှ ရဲဝံ့စွာ ကယ်တင်” ဟု ရေးလိုက်သည်။
လူရွယ် ။ … ။ “ကျွန်တော် ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် မဟုတ်ပါဘူး”
သတင်းထောက်က “သြ … ဟုတ်လား” ဆိုပြီး ကွန်မြူနစ်ကေဒါတစ်ဦးနေရာတွင် မော်စကိုမြို့သားတစ်ဦးဟု ပြင်ရေးလိုက်သည်။
လူရွယ် ။ … ။ “ကျွန်တော် မော်စကိုမြို့သားမဟုတ်ပါဘူး”
ထောက် ။ … ။ “ဒါဆိုရင် ခင်ဗျား ဘာမြို့သားလဲ”
လူရွယ် ။ … ။ “ကျွန်တော် နယူယောက်ကလာတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် တစ်ဦးပါ”
ထိုအခါ သတင်းထောက်က နောက်ဆုံးရေးလိုက်သည်မှာ …
“ယန်းကီးတစ်ဦးက အိမ်မွေးခွေးလေးတစ်ကောင်ကို ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်”
တစ်နေ့တွင် အမေရိကန်၌ ကမ္ဘာကြီးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ် ကြေညာလိုက်ရာ ၎င်းသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာအသီးသီးက စက်ရပ်သတင်း ခြောက်လိုင်းစလုံး ခေါင်းစီးတပ်သွားကြသည် မှာ …
USA Today ။ … ။ “ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသေပြီ”
Wall Street Journal ။ … ။ “ကမ္ဘာဆုံးတော့မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း တဟုန်ထိုးကျဆင်း”
National Enquirer ။ … ။ “ဒိုင်ယာနာနှင့် ချားလ်စ် ပြန်ဆုံကြတော့မည်”
Inc. Magazine ။ … ။ “ဘုရားသခင်ထံမှ နည်းလမ်း ၁၀-ချက်”
Rolling Stone ။ … ။ “သေမင်းလက်ဆုံ မဟာဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲကြီး”
Sports Illustrated ။ … ။ “ပွဲချိန်စေ့ပြီ”
Playboy ။ … ။ “ကောင်းကင်ဘုံမှ မော်ဒယ်မလေးများ”
Lady’s Home Journal ။ … ။ “အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် ကမ္ဘာပျက်နေ့ကြီးတွင် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀-ပေါင် လျော့နည်း စားဖွယ်ရာများ”
Discover Magazine ။ … ။ “ကော့စမစ်တစ် ရောင်ခြည်များအတွင်းတွင် လူ့ဘ၀ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်နည်း တွေ့ပြီ”
Microsoft Systems Journal ။ … ။ “နက်စကိတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာဈေးကွက် ဆုံးရှုံးပြီ”
Microsoft Website ။ … ။ “ဘ၀နေ၀င်ချိန်မှာ ပျော်ရွှင်စွာနေနည်း အတွေ့အကြုံ သင့်မှာ မရှိသေးလျှင် RAPT777.exe ကို download လုပ်ပါ။
America Online ။ … ။ “system ယာယီရပ်ဆိုင်းမည်၊ ၁၅ မိနစ်ကြာမှ တစ်ခါ ပြန် ကြိုးစားကြည့်ပါ”
ဟာသလေးကတော့ ဒါပါပဲ ရှင်။ ရယ်ရလားတော့ မသိဘူး။
မရယ်ရရင်တော့ ကျမလည်း တတ်နိုင်ဘူးရှင့်။ ကျမတော့ ဒုတိယ ဟာသကို ဖတ်ပြီး ဘလော့ဂါတွေလည်း ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ ရေးလေ့ရှိတတ်ကြတာကို သွားသတိရမိတယ်။ အကယ်၍သာ ဒီသတင်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဘလော့မှာ ဖော်ပြကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရေးကြမလဲဆိုတာ သိချင်လှပါဘိတော့တယ်။
၂၅၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်
(၀န်ခံချက် ။ … ။ ၂၀၀၇၊ ဧပြီလထုတ် ဟဒယမဂ္ဂဇင်းမှ။)
Posted by မေဓာဝီ at 6:10 AM 16 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကျော်က ဗိုလ်လုပ်လိုသလား (၂) မှာ …
ဗိုလ်လုပ်လိုသူများသည် ဗိုလ်စိတ်နှင့် ဗိုလ်အလုပ်ကို ရှေးဦးစွာ သိထားရမည်။ … ဆိုတဲ့နေရာမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတပတ်မှာတော့ ဗိုလ်စိတ်ကို တခုချင်း ရှင်းပြထားတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဗိုလ်စိတ်သည် ၅-မျိုးရှိပေ၏။ ၎င်း ၅-မျိုးရဲ့ သရုပ်မှာ -
၅။ ပညာဗိုလ် .. တို့ဖြစ်ကြကုန်၏။
သဒ္ဓါဗိုလ် = သဒ္ဓါ + ဗလ
သဒ္ဓါ = ယုံကြည်မှု၊ ဗလ = အားကြီးမှု
သဒ္ဓါဗိုလ် = ယုံကြည်မှု အားကြီးခြင်း။
ယုံကြည်မှုဆိုတာ ဘာကိုယုံကြည်တာလဲ။ ဒီလိုမေးသော်၊ ဘုရားနှင့် ဘုရား၏ ဂုဏ်တော်ကို တကယ်အမှန်ရှိကြောင်း ယုံကြည်တယ်၊ တရားနှင့် တရား၏ ဂုဏ်တော် တကယ်အမှန်ရှိကြောင်း ယုံကြည်တယ်။ သံဃာနှင့် သံဃာတော်၏ ဂုဏ်ကို တကယ်အမှန်ရှိကြောင်း ယုံကြည်တယ်။ ကုသိုလ် ဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်တယ်။ အကုသိုလ်ကိုလည်း ယုံကြည်တယ်။ ၎င်း နှစ်ပါးရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ် ရှိကြောင်းကိုလည်း ယုံကြည်တယ်။ ဆိုခဲ့သည့် အားလုံးကို ယုံကြည် သော စိတ်ကို သဒ္ဓါလို့ ဆိုပေသည်။
ဤယုံကြည်မှုမျိုးသည် သေးသေးကွေးကွေး ယုံကြည်မှုမျိုးမဟုတ်၊ အားနှင့်အင် နှင့် မပြိုမကွဲ ခိုင်မြဲစွာ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် (၀ါ) အခြားယုံကြည်မှုတို့ ထက် မြင့်မြတ်ကြီးကဲခြင်းကြောင့် သဒ္ဓါဗိုလ်လို့ ဆိုပေသည်။
ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါဆိုတာ သတ္တ၀ါတိုင်း မဖြစ်ပေါ်နိုင်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံကြသော သူတို့ပင် သဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းပေ၏။ မိဘရိုးရာ ဓမ္မတာအလေ့ အလာမို့ ပြုလုပ်သူတို့သာ များကြကုန်၏။
အချို့သောသူတို့သည် ဒုက္ခိတများ တောင်းရမ်းလာသောအခါ မကြည့်ချင်၍ အမြန်ထွက်သွားလို၍ ပေးစွန့်လိုက်ကြကုန်၏။ ဤအမှုမျိုးလည်း သဒ္ဓါတရား မဟုတ်၊ မျက်စိအေး နားအေးမျှသာ ဖြစ်ကုန်၏။ ဤမှတပါး ပြုလုပ်ကြသော အချိုးမကျသော အမှုတို့လည်း များစွာ ရှိပေသေး၏။ အမှုလမ်းကြောင်းကပင် ဟုတ်သော်လည်း စိတ်ထား မစင်ကြယ်ခြင်းကြောင့် သဒ္ဓါစစ် သဒ္ဓါကောင်း မဖြစ် ကြကုန်။ ဒါကြောင့် သတ္တ၀ါတိုင်း သဒ္ဓါတရား မဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းကို ပြောဆို ခဲ့ပေသည်။
၁။ အာဂမသဒ္ဓါ - ဘုရားအလောင်းများ၏ သန္တာန်၌ ယုံကြည်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ထိုသဒ္ဓါမျိုးသည် ဖြစ်လေရာဘ၀တိုင်း၌ ပျောက်ကွယ်ခြင်းမရှိဘဲ ယုံကြည်မှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
၂။ အဓိဂမသဒ္ဓါ - အရိယာတို့သန္တာန်၌ ဖြစ်ပေါ်သော ယုံကြည်မှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် တည်ရှိနိုင်သည်။
၃။ သြကပ္ပနသဒ္ဓါ - ဉာဏသမ္ပယုတ်သဒ္ဓါမျိုးဖြစ်သောကြောင့် တဘ၀လုံး တည်တံ့ခိုင်မြဲနိုင်သည်။
၄။ ပသဒ္ဓသဒ္ဓါ - ဉာဏ၀ိပ္ပယုတ်သဒ္ဓါမျိုး ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်လွယ်ပျက်လွယ် သည်။ ယခုအခါမှာ ပသဒ္ဓသဒ္ဓါမျိုးသာ များကြကုန်၏။ အချို့သော ကျောင်းအမ ကျောင်းဒါယကာတို့သည် ဘုန်းကြီး၏ အကျင့်ကောင်းမကောင်းကို မစိစစ်ဘဲ အပေးအယူတည့်က ကြည်ညို၏၊ အပေးအယူလွဲသော အကြည်ညိုပျက်ကြ ကုန်၏။
၅။ မုဒ္ဓပသန္နသဒ္ဓါ - သဒ္ဓါတရားမဟုတ်၊ သဒ္ဓါမှလွတ်ကင်းသော ယုံကြည်မှု ဖြစ်သည်။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ တပည့်များသည် သူတို့၏ဆရာကို ယုံကြည်သောသဒ္ဓါဟု ဆိုပေသည်။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာများသည် ယုံကြည်လောက်အောင် ဂုဏ်မရှိပါဘဲနှင့် မိုက်မဲသောတပည့်များက သံယောဇဉ်ကြောင့်သော်၎င်း၊ မျိုးရိုးအလိုက်သော်၎င်း ယုံကြည်ကြသဖြင့် မောဟလျှင် အကြောင်းခံသောကြောင့် မုဒ္ဓပသန္နသဒ္ဓါဟု ဆိုပေသည်။
သဒ္ဓါတရားဆိုတာ မွေးမြူရပေသည်။ မွေးမြူဆိုသော စကားသည် ယုံကြည်မှု ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ၀ီရိယဖြင့် မိမိစိတ်ကို ပြုပြင်မှုပင်ဖြစ်ပေသည်။
ဥပမာ - အိပ်ရာဝင်တွင် ဘုရားမရှိခိုးချင်သော သူတယောက်သည် အတင်းရော အဓမ္မ မိမိစိတ်ကို လှုံ့ဆော်ကာ ဘုရားရှိခိုးလေလျှင် နောက်တနေ့၌ ၎င်းအချိန် ကျရောက်က သတိရလာလေ၏။ ရလာသော သတိအတိုင်း ပျင်းပျင်းနှင့် ထ၍ ရှိခိုးပြန်လျှင် နှစ်ကြိမ် ရှိခိုးမိလေ၏။ ဤနည်းအတိုင်း ဆက်ကာ ဆက်ကာ မပျက်မကွက် ရှိခိုးလို့လာဆင် တစတစ သဒ္ဓါတရားဖြစ်ပေါ်လို့ လာလေ၏။ ၎င်း သဒ္ဓါတရားသည် တနေ့ထက်တနေ့ စင်ကြယ်ကြီးမြင့်ပြီး ဗိုလ်ထိုက်သော သဒ္ဓါ အဖြစ်သို့ ရောက်နိုင်ပေ၏။
သဒ္ဓါတရားဖြစ်ပေါ်အောင် မွေးမြူပါ။ ဖြစ်ပေါ်လာသော သဒ္ဓါတရားကို တစတစ ကြီးကျယ်အောင် မြှင့်တင်ပြီး ဗိုလ်အဖြစ်သို့ ရောက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ သဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပေါ်ရန် နည်းမှာ … ပထမ - ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို သိအောင် အားထုတ်ပါ။ ဒုတိယ - ထိုဂုဏ်တို့ကို ယုံကြည်မှုပေါ်လာအောင် အားထုတ်ပါ။ ယုံကြည်မှု ပေါ်လာတာကို သဒ္ဓါဖြစ်သည်ဟု ခေါ်သည်။
ဒုတိယအချက်၌ ဗိုလ်အဖြစ်သို့ရောက်အောင် ပြုလုပ်ပါဆိုသည်မှာ ယုံကြည်မှု ပေါ်လာသော သဒ္ဓါကို နောက်ဆုတ်သေးငယ်၍ မသွားစေဘဲ ဘာဝိတာ၊ ဗဟုလိကတာ ဆိုသည့်အတိုင်း အခါများစွာ အကြိမ်များစွာ ပွားများသည်ရှိသော် သဒ္ဓါသည် ရှေ့သို့တိုးပြီး ကြီးကျယ်ခိုင်ခန့်သဖြင့် ဗိုလ်စိတ် ပေါ်လို့လာပေ၏။ ဗိုလ်စိတ်နှင့် ဗိုလ်အလုပ် အားထုတ်ပြုလုပ်က ဗိုလ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရပေလိမ့် မည်။
သဒ္ဓါဗိုလ်ကတော့ ဤမျှပါပဲ။ သာဓက၀တ္ထုဇာတ်ကြောင်းတွေတော့ ရှည်လျား နေမှာစိုးတာကြောင့် မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ အတိုချုပ်ကောက်နုတ်ပြီး ဖော်ပြခြင်း မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန် ဗိုလ် ၄-ပါးကို တပတ်ကျော်မှာ တပုဒ်စီ ဖော်ပြသွား ပါမယ်။
၂၇၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 7:02 AM4comments
Posted by မေဓာဝီ at 5:57 AM6comments
၀ိုင်းကြီး ၀ိုင်းကြီး ဘယ်လောက်ကြီး
(ဟော … ဒီလောက်ကြီး)
၀ိုင်းလေး ၀ိုင်းလေး ဘယ်လောက်သေး
(ဟော … ဒီလောက်သေး)
(ငါးမူး တကျပ် ပေးရတယ်)
သူတို့ငယ်ငယ်က ဒီကစားနည်းကို နှစ်ခြိုက်မက်မောစွာ ကစားခဲ့ကြဖူးသည်။ ကစားမည့်သူတွေ လက်ချင်းချိတ်ဆက်ကာ ၀ိုင်းဖွဲ့ထားလျက် အထက်ပါအတိုင်း ဆိုကာ ကစားခဲ့ကြ၏။ ၀ိုင်းကြီးဝိုင်းကြီး ဘယ်လောက်ကြီးဆိုလျှင် တွဲထားသည့် လက်တွေကို ကျယ်နိုင်သမျှ ကျယ်အောင် တဆုံးဖြန့်ကားပြီး စည်းဝိုင်းကြီးကြီး ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရသည်။ ၀ိုင်းလေးဝိုင်းလေး ဘယ်လောက်သေး ဆိုလျှင်တော့ လူချင်းထိမတတ် ပူးကပ်ကာ လက်တွဲလေးတွေချုံ့လျက် စည်းဝိုင်းကလေး သေးနိုင်သမျှ သေးအောင် လုပ်ကြရသည်။
အဲဒီလို ကစားခဲ့ကြတဲ့အရွယ် ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ….
သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဘိုး အဘွား အဖေ အမေ … ဦးကြီး ဦးလေး ဒေါ်ကြီး ဒေါ်လေး … ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ဒီလောက်သာ ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒီသိုက်မြုံလေး ထဲမှာသာ ရှင်သန်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ အ၀န်းဝိုင်းကလေးသည် ကျဉ်းမြောင်းလှ ပါသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော အ၀န်းဝိုင်းလေးမှာ တဦးနှင့်တဦး နီးကပ်စွာ တည်ရှိ ကြပြီး တွဲချိတ်ထားသော လက်များသည်လည်း နွေးထွေး မြဲမြံခဲ့ကြသည်။
အသက်အရွယ် ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း မျိုးစုံ အလယ် ကျင်လည်ကြရရင်း သူတို့၏ အ၀န်းဝိုင်းကလေးသည် တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ချေပြီ။ ဒီလိုကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ တွဲလက်ကလေးတွေသည် မထိတထိ မခိုင့်တခိုင် မြဲမြံစွာ မဆုပ်ကိုင်နိုင်ကြတော့။ မိမိ၏ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ကျယ်နိုင်သမျှ ကျယ်အောင် ကြီးနိုင်သမျှ ကြီးအောင် ကြိုးစားရင်းဖြင့် တဦးနှင့် တဦး ဝေးကွာလာခဲ့ကြသည်။ အေးစက်လာခဲ့ကြသည်။
ဒီကစားနည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ကို ခုချိန်ထိ သူသေချာမသိခဲ့ပါ။
မအေး ခြင်ထောင် ဘယ်လောက်ပေးရတယ် … ဟု ဘာကြောင့်မေးသလဲ၊ သူမသိ။ ငါးမူးတကျပ် ဆိုသည့်ဝေါဟာရကို ကလေးတွေ နားလည်အောင် မိတ်ဆက်ပေး ခြင်းပေလား။ ဖြစ်နိုင်ချေများကို ခုမှ ဇဝေဇ၀ါ စဉ်းစားမိနေ၏။ သေချာတာကတော့ သူတို့ငယ်ငယ်က ခြင်ထောင်ကလေးတွေနှင့် အိပ်ခဲ့ကြရသည်။ ညဘက်အိပ်ခါနီး ခြင်ထောင်လေးထဲ ၀င်လိုက်လျှင်ပင် လုံခြုံမှုရှိသလို ခံစားခဲ့ရသည်။ ခြင်ထောင် အောက်အဖျား လေးဘက်လေးတန်ကို မွေ့ရာအောက် ဖိညှပ်ပြီး ခေါင်းအုံးလေးပေါ် အိပ်ကာ ခြင်ထောင်အမိုးဖြူဖြူကို ကြည့်ရင်း တခါတလေ ဟိုသည်တွေးမိတာတွေ လည်းရှိခဲ့သည်။
နွေနှင့်မိုးဆိုလျှင် ဇာခြင်ထောင်ပါးပါးလျားလျားလေး၊ ဆောင်းဆိုလျှင် အအေး ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပြီး လုံခြုံနွေးထွေးစေသည့် ပိတ်ခြင်ထောင် ထူထူထဲထဲ၊ ဒီလို ခြင်ထောင်လေးတွေအတွင်းမှာ ညပေါင်းများစွာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်ခဲ့ဖူး ပါသည်။ အခုဆိုလျှင် ခြင်ထောင်နှင့် မအိပ်ရတာကြာပြီ။ တိုးတက်မှုလေလား ဆုတ်ယုတ်မှုလေလား သူ မဝေခွဲတတ်ပေမဲ့ ခြင်ထောင်မရှိသော အိပ်ရာထက်မှာ အိပ်ရင်း မျက်နှာကြက်ကို ငေးမောကာ တလွန့်လွန့် လှုပ်ရှားတတ်သော အမိုး ဖြူဖြူနှင့် ဇာခြင်ထောင်ကလေးကို သတိရမိပါ၏။
ဒီလိုသတိရရင်း အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဘ၀၏ မလုံခြုံမှုကို ပိုမိုသိရှိ ခံစားမိလာသည်၊ ခိုင်မြဲမှု မရှိခြင်းကို ပို၍သဘောပေါက်နားလည်လာမိသည်။ သူတို့ဘ၀တွေဟာ ဘယ်လောက်များ လုံခြုံမှုရှိပါသလဲ။ ငယ်ငယ်ကလို ခြင်ထောင် လေးထဲဝင်လို့ လုံခြုံမှုရှိပါမည်ဆိုလျှင် ငါးမူးတကျပ်မကသော ငွေကြေးဖြင့် ဘ၀ကို ငါးဘက် ငါးတန် လုံခြုံအောင် ကာရံပေးထားသော ခြင်ထောင်လေးတွေ ၀ယ်ယူလိုပါသည်။ သို့ပေမဲ့ … ဘ၀၏ လုံခြုံမှု နွေးထွေးမှု စိတ်ချရမှုဆိုတာ ငွေကြေးဖြင့်ဝယ်ယူ၍ ရနိုင်ပါသလား။ တစုံတယောက်ကရော ပြန်လည်ရောင်းချ၍ ရနိုင်ပါသလား … ။ သူ တွေးနေမိပါ၏။
ကစားပွဲထဲမှာတော့ အမေဆူမှာစိုး၍ ခြင်ထောင်ကလေး မရောင်းချင်ပါ … တဲ့။
အဲဒီအရွယ်တုန်းက အမေဆူလျှင် အဖေ့ဆီသွားမည်။ အဖေမရှိလျှင် အဘိုးဆီ သွားမည်၊ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေဆီသွားမည်။ ကိုယ့်မှာ အားကိုးစရာတွေ တပုံ တပင်။ ချစ်သူ ခင်သူ စောင့်ရှောက်မည့်သူ အများအပြား။
ခုချိန်မှာတော့ တစုံတခု မှားယွင်းခဲ့သည့်တိုင် အမေကလည်း ဆူမှာမဟုတ်တော့ ပြီမို့ လောကကြီး၏ ဒဏ်ခတ်မှုကိုသာ ကြုံရဆုံရ ခံစားရချေမည်။ ထိုအခါ အမေဆူ တုန်းကလို မည်သူ့ထံအားကိုးတကြီးဖြင့် ပြေးရပါမည်လဲ။ ပြေးလို့ရနိုင်ပါ့မလား။ လောကကြီးကပေးသော အပြစ်ဒဏ်ကိုသာ ခါးစည်း အံကြိတ်ခံစားရင်း ဒီဘ၀ ကြီးထဲ ဆက်လက် ရှင်သန်ကြရပေဦးမည်။ ဘ၀တခု မဆုံးသရွေ့ဆိုပါတော့။
ဒီလိုနှင့် သူတို့၏ အ၀န်းအ၀ိုင်းလေးသည် တပတ်ပြီးတပတ် လည်ပတ်နေခဲ့ပါ သည်။ ဒီလိုလည်ပတ်ရင်း တချို့လည်း လက်တွဲဖြုတ်သွားကြသည်။ တချို့ရဲ့ လက် တွေ ပြုတ်သွားကြသည်။ တချို့က လည်ပတ်နေသော စည်းဝိုင်း၏ အပြင်ဘက်ကို ရောက်သွားကြသည်။ တချို့ကတော့ ခိုင်မာစွာ မရပ်တည်နိုင်တဲ့အဆုံး ဘ၀ကို အရှုံးပေးကာ ယိုင်လဲသွားကြသည်။ အနည်းငယ်သော တချို့မှာတော့ တွဲကိုင်ထား သည့် လက်နှစ်ဘက်ကြားထဲ တိုးကာ ၀င်လာကြပြန်သည်။
ထိုသို့ ဤသို့ ၀င်လာရင်း ထွက်သွားရင်း လည်ပတ်နေသော အ၀န်းအ၀ိုင်းလေး သည် သေးငယ်သွားလိုက် ကြီးကျယ်သွားလိုက် … ။
လွတ်မြောက်ရာ မရောက်မချင်း …
“၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေေ၀” ဟု နှုတ်ဖျားမှ မရွတ်ဆိုသော်လည်း ဆိုဘိသကဲ့သို့ ပတ်ချာလည်လှည့်ကာ ဘ၀များစွာ၌ ကျင်လည်နေရဦးမည်သာတည့်။
(ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားခဲ့ဖူးသည့် ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေေ၀ ကစားနည်းအား အခြေခံ၍ မိမိစိတ်ကူးမိသလို ရေးဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Posted by မေဓာဝီ at 4:00 AM 11 comments
သူသာရှိခဲ့ရင် … ဒီကနေ့ သူ့မွေးနေ့။
သူသာရှိခဲ့ရင် … ဒီလိုနေ့မှာ သူ့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေ အင်တာနက် စာမျက်နှာထက် မြင်ကြရမှာသေချာပါတယ်။ သူ့ကို လူတကာကချစ်ခင်ကြ တယ်။ သူဟာ အားလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးကို ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်အောင် ပြုစွမ်းပေးနိုင်တဲ့ သူ။
ခုတော့ … သူမရှိတော့ပါဘူး … ။ သူမရှိတော့တဲ့တိုင် သူ့ကိုသတိတရရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် … သူ့ကို တသသ လွမ်းနေသူတယောက် ဒီကမ္ဘာကြီး ပေါ်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ … သူ … သိနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီနေ့ မနက် ရွှေတိဂုံဘုရားကိုသွားဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုရည်စူးပြီး ရွှေတိဂုံဘုရား မီးပူဇော်ဖို့ ငွေလှူခဲ့တယ်။ ဘုရားရှေ့မှာ … ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ခဲ့တယ်။
သူငယ်ချင်း …ရောက်လေရာဘ၀မှာ … ငြိမ်းချမ်းရပါစေ … ။
၂၄၊ ၆၊ ၂၀၀၇
နံနက် ၉ နာရီ ၃၀
Posted by မေဓာဝီ at 4:18 AM7comments
ဒီမှတ်တမ်း စာအုပ်ကလေးဝယ်တော့ သူနဲ့အတူတူ ကျမလည်းပါပါတယ်။ သူက အမှတ်တရ အော်တိုရေးဖို့ စာအုပ်ကလေး တအုပ်ဝယ်ချင်သတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ သူနဲ့ အတူတူ ကျောက်မြောင်းထဲက စတိုးဆိုင်တဆိုင်မှာ ရှာပြီးဝယ်ခဲ့တယ်။ စာအုပ် လေးက သားရေဖုံး အညိုရောင်လေး။ ငှက်မွှေးကလောင်ကလေးနဲ့ … ။
“ဒါဆိုရင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ခန့်ခန့်ငြားငြား ရှိတယ်မဟုတ်လား …” လို့ သူ့ရဲ့ အမေးကို ကျမလည်း ပြီးပြီးရော ခေါင်းညိတ်ခဲ့တာပဲ။ မကောင်းဘူးပြောလို့ သူထပ်ပြီးရှာနေရင် အချိန်တွေကြာမှာ စိုးတာကြောင့်ပေါ့။
သူ့စိတ်ကြိုက် စာအုပ်ကလေးရတော့ ကျမကို ဦးဆုံးရေးခိုင်းပါတယ်။ အိမ်ပြန် ရောက်ရောက်ချင်း စားပွဲမှာထိုင် .. သူရှေ့မှာပဲ ဒီစာတမ်းလေး ရေးပေးလိုက် တယ်။ သူကတော့ ဖတ်ပြီး ပြုံးတုံးတုံးနဲ့လေ။
ဒီစာအုပ်လေးထဲ ရေးခွင့်ရခဲ့ကြတဲ့ သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ စာသားလေးတွေ အမှတ်တရ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(စာအုပ်ကလေးက နောက်ဆုံး နတ်သမီးငယ် (ခ) ငယ်လေး ဆီမှာ ကျန်နေခဲ့ တာပါ။ သူ့ဆီကနေ တောင်းပြီး ကျမသိမ်းထားခဲ့တယ်။)
(ချစ်သူငယ်ချင်း မမဗန် (ခ) တင့်ဇင်လတ် .. အမှတ်တရ)
Posted by မေဓာဝီ at 3:30 AM0comments
တခါတုန်းက လူရွယ်တယောက်ဟာ ရွက်လှေတစီးနဲ့ ပင်လယ်ဆီခရီး ထွက်ခဲ့ တယ်။ ပင်လယ်ဟာ လှိုင်းကြက်ခွပ်ကလေးတွေ တလက်လက်ထလို့ လှပ နေတာပဲ၊ လေညင်းနုနုကလည်း သူ့ရဲ့ရွက်ကို အားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ တသုန်သုန် တိုက်ခတ်လို့ …၊ ပင်လယ်ပျော် ငှက်ကလေးတွေလည်း ရွက်လှေအနီးအပါးမှာ တ၀ဲဝဲပျံသန်းလို့ …၊ ငါးကလေးတွေ ဖျံကလေးတွေကလည်း သူသွားရာနောက် တကောက်ကောက်လိုက်လို့။ သူဟာ ပြာလဲ့ကြည်စင်နေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်ပြီး လောကကြီးရဲ့အလှကို အပြည့်အ၀ခံစားရင်း တေးသီချင်းတွေ သီကျူးနေစဉ်မှာ ရွက်လှေကလေးကတော့ လေရဲ့သယ်ဆောင်ရာအတိုင်း တလွင့်လွင့် မျောလို့ နေလေရဲ့။
သူဟာ ငှက်ကလေးတွေနဲ့ စကားတင်းဆိုလိုက်… ငါးကလေးတွေနဲ့ မြူးထူး ပျော်ပါး ဆော့ကစားလိုက် …လေပြေလေညင်းထဲ ဝေ့၀ဲပါလာတဲ့ ပင်လယ် ရနံ့ကို မက်မောစွာ ရှူရှိုက်လိုက်… အဲဒီလိုနေလာလိုက်တာ သူသတိမထားမိ ခင်မှာပဲ ရုတ်တရက် လေက ငြိမ်ကျသွားပါလေရော။ ကောင်းကင်ကြီးကလည်း ချက်ချင်းဆိုသလို ပြောင်းလဲသွားတယ်။ လှိုင်းကြက်ခွပ်တွေက ငြိမ်သက် နေရာက တစတစ လူးလွန့်လှုပ်ရှားလာတယ်။
တကယ်ကို သူ မသိဘူးတဲ့။ ဘေးဘီဝဲယာ ကြည့်မိတော့ သူ့နဘေးမှာ ငှက်ကလေးတွေလည်း မရှိကြတော့ဘူး။ ရေထဲက ငါးကလေးတွေလည်း ဘယ်ဆီရောက်ကုန်ကြပါလိမ့်။ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ကြည့်နေဆဲမှာပဲ … ကောင်းကင်က နီမှောင်မှောင် အရောင်သမ်းလာတယ်။ ငြိမ်နေတဲ့ လေက တဖြည်းဖြည်း ကြမ်း တမ်းစွာ တိုက်ခတ်လာတယ်။ ပင်လယ်ပြင်မှာလည်း လှိုင်းတံပိုးတွေ ထလာပြီး သူ့ရဲ့ ရွက်လှေကလေးက တလူးလူး တလွန့်လွန့် နဲ့။ လှေကို ငြိမ်အောင်ထိန်းရင်း သူကိုယ်တိုင် လှေပေါ်မှာ ဆောက်တည်ရာ မရတော့ဘူး။
ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကောင်းကင်က ဒေါသတကြီးနဲ့ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေကို သွန်ချ တယ်။ လေကလည်း တ၀ီဝီအော်မြည်ရင်း ပြင်းသည်ထက် ပြင်းလာတယ်။ လှိုင်း တွေကလည်း ထန်သည်ထက် ထန်လို့ပေါ့။
“ဒါ … မုန်တိုင်းပဲ …”
သူ … သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရာရာ နောက်ကျသွားပါပြီ။
ရွက်လှေကလေးရဲ့ ရွက်တိုင်ဟာ လေပြင်းအဝှေ့ လှိုင်းကြမ်းအပုတ်မှာ သွင်သွင် ကျိုးလို့သွားခဲ့ပြီ။ အားကိုးရာမဲ့ လှေကလေးဟာ ပင်လယ်ရဲ့ လှိုင်းလုံးကြမ်းကြမ်း ကြီးတွေထဲမှာ မြုပ်ချီ ပေါ်ချီ။ ဦးတည်ရာမဲ့ … ။
ငါးကလေးတွေ …. မင်းတို့ဘယ်မှာလဲ …….
ငါ့ကို ခွဲမသွားကြပါနဲ့ ………………………….
သူ မြတ်နိုးတဲ့ အရာတွေကို တမ်းတလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ရောက် မလာကြပါဘူး။ အားလုံးက သူ့ကို စွန့်ခွါထားခဲ့ကြပြီလေ။ သူ့အတွက် အရာရာ ဟာ ရုတ်ချည်း အကျည်းတန်လို့ သွားတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ လှိုင်းလုံးကြီးတလုံးက ၀ုန်းခနဲ ရိုက်ပုတ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး အားကိုးရာ လှေကလေးနဲ့ သူ့ကို ကွဲကွာစေခဲ့တော့တယ်။ လှေကလေးက တစစီ ကျိုးကြေလို့ … ။ သူ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်း တစစီ ကွဲပျက်လို့ … ။ ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်တဲ့ ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ လှိုင်းတွေကိုဆန်ပြီး သူ တယောက်ထဲ ကူးခတ်လို့ နေခဲ့သတဲ့။
ဒီလိုကူးခတ်လာလိုက်တာ … အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ခြေကုန်လက်ပမ်း လည်း ကျလုပြီ။ စိတ်ဓာတ်တွေလည်း တစတစ ပိုပြီး ယိုယွင်းလာပြီ။ အသက် ရှင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ဘူးလား … သူဟာ အားငယ်စွာ တွေးနေမိတယ်။ အားအင်ကုန်ခမ်းမတတ် ဖြစ်နေချိန် ရှေ့ခပ်ဝေးဝေးတနေရာမှာ လှိုင်းတွေကြား ထဲ ပေါလောပေါလော မျောပါနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတခုကို သူသွားတွေ့တယ်။ ဒီအရာကို ဆွဲကိုင်မှီခိုလို့တော့ ရမှာပဲလို့ သူတွေးမိပြီး အဲဒီနားကို အရောက် အားတင်းပြီး ကူးခတ်သွားလိုက်တယ်။
သေချာပါတယ်။ အဲဒီအရာဝတ္ထုဟာ သစ်တုံးတတုံးဆိုတာ အနားအရောက်မှာ သူသိသွားတာပေါ့။ ဒီသစ်တုံးကို လှမ်းဆွဲပြီး ပွေ့ဖက်လိုက်စဉ်မှာ သူ့ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး ပင်ပန်းသမျှတွေ ပြေပျောက်စေခဲ့တယ်။ သစ်တုံးလေးပေါ် ခေါင်းတင် မှီထားရင်း မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေအတွက် အနားယူနိုင်ခဲ့တယ်။ သစ်တုံးလေးကို မလွတ်တမ်း ဖက်တွယ်ထားပြီး ပင်လယ်လှိုင်းကြမ်းတွေကို သူရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ တယ်။ သစ်တုံးလေးနဲ့သူ အတူတူတွဲပြီး ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ ကူးခတ်နေရင်း ကြုံလာတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ကဲ … ဘာကိုများကြောက်နေရဦးမှာလဲ …။
ဘယ်အရာကများ သူ့အတွက် အတားအဆီး ဖြစ်နေဦးမှာလဲ … ။
သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ … သစ်တုံးလေး ရှိနေခဲ့ပြီလေ။
အဲဒီလိုကူးခတ်နေရင်း တမနက်ခင်းမှာ သူတို့ဟာ ကျွန်းလေးတကျွန်းဆီကို ရောက်ခဲ့ကြသတဲ့။ ကျွန်းပေါ်က သဲသောင်ပြင်မှာ သစ်တုံးလေးကို ခေါင်းအုံးလို့ ခြေပစ်လက်ပစ် အမောအပန်းဖြေပြီးနောက် စားသောက်စရာတွေ ရှာဖွေ စားသောက်တယ်။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ နေရာထိုင်ခင်း ရှာဖွေစီစဉ်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် အရာရာ အဆင်ပြေစပြုနေချိန်မှာ သစ်တုံးလေး ကတော့ သောင်ပြင်ပေါ်က နေပူပူအောက်မှာ ခြောက်သွေ့စွာနေရင်း သူ့ရဲ့ အဆင်ပြေမှုတွေကို တွေတွေလေးသာ ငေးကြည့်နေခဲ့သတဲ့။
သူက သစ်တုံးလေးကိုတော့ မမေ့ရှာပါဘူး။ အသုံးတော့ချတတ်ရှာပါတယ်။ ခေါင်းအုံးတဲ့အခါအုံး၊ ခြေထောက် တင်တဲ့အခါတင်၊ တခါတလေလည်း သစ်တုံးလေးပေါ်ထိုင်ပြီး ပင်လယ်ကြီးဆီ ငေးမောလို့ နေတတ်သေးတယ်။ သေချာတာတခုကတော့ သစ်တုံးလေးနဲ့သူဟာ … အတူတူ နေပါလျက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဝေးဝေးသွားလေရဲ့။
ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ပြီး မွှေးပျံ့တဲ့ပန်းလှလှလေးတွေရဲ့ ရနံ့ကိုရှူရှိုက်ရင်း … ချိုမြိန်တဲ့သစ်သီးတွေကို စားသုံးရင်း …နွေးထွေးတဲ့နေခြည်ကို ခံယူရင်း …အေးမြတဲ့စမ်းရေကို သောက်သုံးရင်း … လှပတဲ့ ငှက်ကလေးတွေနဲ့ တေးဆို ရင်း… ပင်လယ်ထဲက ငါးကလေးတွေ လိပ်ကလေးတွေနဲ့ ဆော့ကစားရင်း … အရာရာကို မေ့လျော့ကာ ပျော်မွေ့နေခဲ့သတဲ့။ ဒါတွေဟာ သူ့စိတ်ကို လှုပ်ရှားစေ နိုင်တဲ့ အရာတွေပဲ။ ဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေပဲ။ ဒီအရာ အသစ်အဆန်း တွေနဲ့ သူပျော်မွေ့နေချိန်မှာ သစ်တုံးကလေးကတော့ မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက် စွာနဲ့ သောင်ပြင်ပေါ်မှာ အထီးကျန်ရင်း … တဖြည်းဖြည်း ဆွေးမြေ့လို့ လာလေ တော့တယ်။
အအေးဓာတ်က တကျွန်းလုံးကို လွှမ်းခြုံထားတယ်။ အေးစက်စက် လေက တ၀ှူးဝှူး တိုက်ခတ်လို့။ သူ … ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းနေပြီ။ သူ့ရဲ့ အ၀တ်အစားက ဒီအအေးဒဏ်ကို အံမတုနိုင်ဘူး။ နားရွက်ဖျား၊ နှာသီးဖျားတွေ ထုံကျင် အေးခဲမတတ် ခံစားနေရတယ်။ သူ … ဘာလုပ်ရမလဲ။
သစ်ရွက်ခြောက်လေးတွေစုပြီး သူ့ရှေ့နားမှာ ပုံလိုက်တယ်။ သူသုံးနေကျ မီးခတ် ကျောက်နဲ့ သစ်ရွက်လေးတွေကို စပြီး မီးညှိတယ်။ ရွက်ခြောက်လေးတွေ တရှဲရှဲ နဲ့ လောင်ကျွမ်းကုန်ကြတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်လည်း အနွေးဓာတ် အသင့်အတင့် တော့ ရလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ညကနက်လေ … အအေးကပိုလေ … ရွက်ခြောက်တွေ လည်း လောင်ကျွမ်းရင်းနဲ့ ကုန်လုပြီ။
သူ့ရဲ့ သစ်တုံးလေးကို ရုတ်တရက်သတိရသွားတယ်။
“အင်း … ဒီသစ်တုံးလည်း ဆွေးနေပါပြီ၊ ငါ့အတွက် မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ဒီသစ်တုံးကို ဖက်တွယ်ပြီး ပင်လယ်ကို ထပ်ကူးလို့လည်း မရနိုင်တော့ဘူး၊ ဒီတော့ …”
နောက်ဆုံးတော့ သူဟာ သစ်တုံးလေးကိုယူပြီး တမြည့်မြည့်တောက်လောင် နေတဲ့ မီးပုံထဲ ထည့်လိုက်သတဲ့။ မီးတွေဟာ ဆွေးမြေ့စပြုနေတဲ့ သစ်တုံးလေး ကို အလွယ်တကူပဲ လောင်ကျွမ်းဝါးမြိုနေတော့တာပေါ့။ သူကတော့ လုံလောက် တဲ့ အနွေးဓာတ်ကိုရပြီမို့ စိတ်ချလက်ချနဲ့ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျသွားပါတော့ တယ်။
တရှိန်ရှိန်တောက်လောင်နေတဲ့ မီးပုံထဲမှာ သစ်တုံးလေးကတော့ နောက်ဆုံး အချိန်ထိ အနွေးဓာတ်တွေ ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး …..
တဖြည်းဖြည်း … … …
လောင်… ကျွမ်း…ပြာ … ကျ….လို့ ... ။
ညဥ့်ဦးက မီးဖိုကလေးလည်း မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပြီ။
နံနက်ခင်းနေရောင်ဟာ ကျွန်းလေးပေါ်ကို နွေးထွေးစွာ ဖြန့်ကျက်လို့နေတယ်။ အိပ်ရေးဝစွာ သူနိုးထလာခဲ့တယ်။ သာယာတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ ပင်လယ်ကြီးကို သူကြည့်နေတယ်။ အိမ်ကိုဘယ်တော့ ပြန်ရမလဲ …တွေးနေမိရင်းနဲ့ … ။
ငှက်ကလေးတွေက တေးသီလို့ … ။
လေနုအေးက ခပ်ဖွဖွတိုက်လို့ … ။
ပန်းလေးတွေလည်း လှပ သင်းပျံ့လို့ … ။
အရာရာဟာ ဘာမှ မပြောင်းလဲပါဘူး။
မီးငြိမ်းသေနေတဲ့ မီးဖိုကလေးဆီက ပြာမှုန်လေးတွေဟာ ပင်လယ်ဘက်ကို ဦးတည်လို့ တလွင့်လွင့် မျောလွင့်နေကြတယ်။ ဒီမီးဖိုလေးရဲ့အလယ် ပြာပုံ ကလေးထဲမှာ မလောင်ကျွမ်းဘဲ ကျန်နေရစ်တဲ့ သစ်ဆွေးတုံးလေးရဲ့ အမြုတေ တခုရှိနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ … သူ တကယ်ကို သိမသွားခဲ့ပါဘူး …. ။
၂၂၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
ည ၇ နာရီ ၃၅ မိနစ်
(ခြေလှမ်းပေါင်း ၂၈၀ပြည့် အမှတ်တရ)
Posted by မေဓာဝီ at 3:54 AM 8 comments
ဒီကဗျာလေးက ကျမမောင်လေး ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပါ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ထုတ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးထဲမှာ သူ့ကဗျာ ၃-ပုဒ် ပါတဲ့အနက် ၂-ပုဒ် ကိုတော့ ကျမဘလော့မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီကဗျာလေးက နောက်ဆုံး ကျန်နေတဲ့ တပုဒ်ပေါ့။
ပထမဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးက သူ့မွေးနေ့တုန်းကပါ။ “အသုံးမ၀င်တော့သော” ဆိုတဲ့ အဲဒီကဗျာလေးကို ကျမအကြိုက်ဆုံးပဲ။ တခါတလေ ကိုယ်တိုင် အဲဒီလို မြစ်ကမ်းနဘေးက သစ်ပင်အိုလို ခံစားခဲ့ရဖူးတယ်။ လဲပြိုဖို့အချိန်ကို မျက်နှာမူ ရင်း တွေဝေမှုတွေ ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်။
နောက်တရက်ခြားမှာ တင်ခဲ့တဲ့ “မှားယွင်းမှု အစစ်အမှန်များ” ကိုတော့ သုံးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို နှစ်သက်မိတယ်။ အမှန်တွေက မှားနေတတ်ပြီး မှားတာတွေ မှန်နေတတ်တဲ့အခါမျိုးတိုင်း သူ့ရဲ့ ဒီကဗျာလေးကို သတိတရ ဖြစ်ခဲ့ မိပါတယ်။
အခုဖော်ပြမယ့် ကဗျာလေးကတော့ “ကောင်းကင်ပေါ်က ပင်လယ်” တဲ့။ ဒီကဗျာလေးက သူရေးသမျှထဲမှာ အနူးညံ့ဆုံးထင်တာပါပဲ။ မခံစားတတ်ခင်က သိပ်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ခုချိန်ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ … … …
မရရင် ရအောင်ယူမယ်။ မဖြစ်ရင် ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ ကြိုးစားခဲ့မိဖူးပါရဲ့။ တကယ်တမ်းတော့ ရအောင်ယူလို့ရတာရှိသလို ရအောင် မယူနိုင်တာတွေလည်း လောကမှာအများကြီးပဲ။ ဒီလိုပါပဲ …ဖြစ်အောင်လုပ် မယ်လို့ စိတ်ကူးနဲ့ လုပ်နေကြပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်တာတွေဆိုတာလည်း ရှိနေတာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်နေရာကိုယ်သိ … ကိုယ့်စိတ်ကို လျှော့ပြီး …နေခဲ့ ရပေါင်းလည်း များလှပြီပေါ့။
အစပျိုးတာတွေလည်း များနေပါပြီ … ကဗျာလေးကို ဖတ်ရှုခံစားကြည့်ကြပါဦး။
*** ကောင်းကင်ပေါ်က ပင်လယ်
ဒါဟာ - လှည့်ကွက်တော့မဟုတ်
ရူးသွပ်စွာ စွဲလမ်းသွားမိတဲ့ ပင်လယ်ရဲ့ အဖြစ်။
ငါဟာ ခဏတာ နမ်းရှိုက်ခွင့်ရရှိခဲ့။
တကယ့်ကို ခဏတာလေးပါပဲ …
ငါဟာ … စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစွာ
မင်းကိုစွန့်ခွါ ထွက်အပြေးမှာ …
လူတွေက ပြောကြတယ် …
‘မိုးရွာနေတယ်’ … တဲ့ ။ …. ။
............................................. ၁၉၉၆၊ မတ်လ
ဒီနေ့တော့ ဒီကဗျာလေးကိုပဲ အထပ်ထပ်ဖတ်နေမိတယ်။
မကြာခင် မိုးတွေရွာတော့မယ် ဆိုတာ …
ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၀၇
နေ့လည် ၁း၃၀ နာရီ
Posted by မေဓာဝီ at 8:00 AM7comments
“မွန်းကျပ်သောနေ့” ဆိုပြီး ၂၀၀၇ ဇန်န၀ါရီလ ၆-ရက်နေ့က ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ မွန်းကျပ်တဲ့ည (၁) ကိုတော့ မေလ ၂၇-ရက်က ရေးခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၁၆-ရက် နေ့မှာ ဘလော့ပေါ်တင်ခဲ့တယ်။ မွန်းကျပ်တဲ့ည (၂) ကို စရေးဖြစ်တာကတော့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ကပါ။
အဲဒီညက လမ်းလျှောက်နေရင်း ညောင်းလာတာနဲ့ ဒီခုံတန်းလေးမှာထိုင်ပြီး ဟိုဟို ဒီဒီ တွေးနေမိရာက ကံ့ကော်ပင်ကြီးအောက် ရောက်နေမှန်း သတိမထားမိဘဲ ရုတ်တရက် ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ကြည်လင်တဲ့ ကောင်းကင်အစား စိမ်းရင့်ရင့် ကံ့ကော်ရွက်တွေက ခေါင်းပေါ်မှာ အုပ်မိုးလို့။ တခါတလေလည်း ညဟာ ကောင်းကင်ပျောက်နေတတ်ပါလားလို့ စိတ်ထဲ မချင့်မရဲနဲ့ … ။ ဒါနဲ့ သစ်ပင်လွတ်ရာကိုသွားပြီး ကောင်းကင်ကြီးကို ထပ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ တကယ်ကို မွန်းကျပ်စရာပါပဲ။ မြင်ကွင်းကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်လိုက်ပြီး ပြန်ကြည့်တော့ … အရာရာ နက်မှောင်လို့။
ဒါနဲ့ ဒီစာအပိုင်းအစလေး ချရေးလိုက်မိတယ်။ ရေးသာရေးခဲ့တယ် အဲဒီညက အဆုံးမသတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ မနေ့ညကမှ ပြီးအောင် ဆက်ရေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။
အသက်ရှင်သန်နေသရွေ့ အလင်းမဲ့ညတွေကို ကြုံရဦးမှာပဲ။
ညတွေကို ကြုံနေသမျှ မွန်းကျပ်တဲ့ညလည်း တခါတလေ ရောက်လာဦးမှာပဲ။ ရောက်လာခဲ့ရင် ထပ်ရေးဦးမှာမို့ ၁ - ၂ လို့ အမှတ်စဉ် ထိုးပြီး ရေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တိမ်တွေဖိစီးလွန်းလို့ ညက မွန်းကျပ်နေပြီ။
ညက မွန်းကျပ်လွန်းလို့များ တိမ်တွေက ဖိစီးကြတာလား။
ညက မှောင်မိုက်စွာ အရောင်ကင်းမဲ့နေတယ် … ။
မှောင်မိုက်စွာ အရောင်ကင်းမဲ့လို့များ ညလို့ခေါ်လေသလား။
လေကငြိမ်သက်နေလို့ သစ်ရွက်တွေတောင် မလှုပ်ကြဘူး။
လမ်းလျှောက်ရင်း အိပ်မက် မက်နေမိသလို …
အသက်ရှူရ ခက်လို့များ အသက်ရှူလို့ မ၀တာလား။
အသက်ရှူမ၀လို့များ အသက်ရှူရခက်နေတာလား … ။
ခက်နေတာက .. မ၀တာ …
မ၀လို့ဘဲ .. ခက်နေတာ … ။
၀ှူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
သက်ပြင်းကို ကစဉ့်ကရဲ ချလိုက်တယ် …
ကောင်းကင်ကို မမြင်ဘူး ..
သစ်ရွက်တွေ အုပ်မိုးနေတယ် … ။
တခါတလေ လှုပ်ရှားလိုက်ပုံများ …
တားလို့တောင်မှ မရ … ။
တခါတလေလည်း ငြိမ်သက်လို့ …
အသက်မရှိတော့သလို … ။
အင်္ကျီအသစ်ကိုလဲလှယ်ပြီး ကျော့ကျော့မော့မော့ … ။
လူမမာတဦးလို ညိုးရော်နွမ်းလျ … ။
ခု .. ကြည့်ပါလား …
စိမ်းကားနေလိုက်ပုံများ …. ။
(၂း၃) အဲဒါ … ည … တဲ့ …လေ …
မြင်ရသလား … အဲဒီညကို …
လှလည်း မလှ …
လလည်း မသာ …
ညှင်းသိုးသိုးနဲ့ည … ။
အထီးကျန်တဲ့ည … ။
ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ည … ။
အိပ်စက်ဖို့ ခက်လွန်းလှ …
မွန်းကျပ်တဲ့ အဲဒီည … ။
၁၃/ ၂၀၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
ည ၁၁း၅၉ နာရီ/ ၁၁း၄၀ နာရီ
Posted by မေဓာဝီ at 8:01 AM6comments
Posted by မေဓာဝီ at 7:07 AM6comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တ တပတ်လောက်က “အမေပင်ပန်းနေမှာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး အီးမေးလ်ကတဆင့် ကျမထံ ရောက်လာပါတယ်။
ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်လိုက်တဲ့ခဏမှာ …
အခန်းကျဉ်းလေးထဲ ရက်ပေါင်းများစွာ တယောက်ထဲ နေရရှာတဲ့ ကျမတို့ အားလုံးရဲ့ “အမေ” (အမေလို့သာ သုံးခွင့်ပြုပါတော့) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြင်ယောင်နေမိတယ်။
ဒီသီချင်းလေး ရတဲ့နေ့ကစလို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထပ်တလဲလဲ နားထောင်ပြီး …
ဖျော့တော့နေမယ့် အမေ ...
နွမ်းနယ်နေမယ့် အမေ …
စိတ်ပင်ပန်း နေလေမလား …
သောကတွေ ဝေနေမလား …
အမေ ဘယ်လိုနေရှာလိမ့်မလဲ …
တွေးမိရင်း ကျမစိတ်ထဲ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲမိပါတယ်။
ဒီနေ့ဆို … အမေ့အသက် ၆၂ နှစ် ပြည့်ပြီလေ။
အိမ်ကလေးထဲမှာ တယောက်ထဲနေနေရပေမဲ့ …
အမေ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲ ဆင်နွှဲကျင်းပပေးနေကြလေရဲ့ …
အမေဟာ ဘယ်တော့မှ အားငယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး …
အမေဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူ …
မြဲမြံတဲ့ ဇွဲနဲ့ အလံမလှဲသူ …
မှန်ကန်သူအများ အမေ့အနားမှာ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာ
အမေလည်း အသိသား မဟုတ်လား။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၂ နှစ်က မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အမေ …
အကျဉ်းကျခံနေရရှာတဲ့ အမေ …
တွေးမိလေတိုင်း ရင်နင့်စွာ ကြေကွဲ
၀မ်းနည်းမိပါတယ် အမေ … ။
နှစ်လများစွာ နေနေရတဲ့ အမေ့ရင်ထဲ
ခဏလောက် ၀င်ကြည့်ချင်ပါရဲ့ …
အမေ ဘယ်လိုများ နေရှာလိမ့်မလဲ … ။
နားထဲမှာ ကြားယောင်နေဆဲပါပဲ အမေ …
နှလုံးသားမှာ စွဲထင်နေဆဲပါ အမေ … ။
စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ လိုလားတဲ့အမေ …
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အမေ …
မညီညွတ် မငြိမ်းချမ်းကြသေးဘူးအမေ …။
သက်ပြင်းတွေ ချနေလေမလား … ။
အမေ့ရဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေ အချည်းနှီး မဖြစ်စေဖို့ …
အမေ့ရဲ့ နွမ်းနယ်မှုတွေ အလဟဿ မဖြစ်စေဖို့ …
ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့အသိ အားလုံးမှာ ရှိကြရင် ကောင်းမယ်အမေ … ။
တချက်ကလေးတော့ ပြုံးလိုက်ပါ … အမေ
ပန်းကလေးတွေတောင် ပွင့်စေနိုင်လို့ပါ အမေ … ။
တေးသီချင်းတပုဒ် ဆိုညည်းလိုက်ပါ အမေ …
ကျောက်ဆောင်တွေတောင် အရည်ပျော်ကျစေလို့ပါ အမေ … ။
ကရုဏာတရားကြီးမားလွန်းလှတဲ့ အမေ …
အမေ့ရဲ့ ကရုဏာတွေအတွက် …
အမှန်တရားက အမေ့ဘက်မှာ ရှိနေပါတယ် အမေ … ။
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ … လို့ … ဆုမတောင်းရက်ပါဘူးအမေ …
“အမေ … … ငြိမ်းချမ်းပါစေ” … လို့သာ …
ကြေကွဲစွာ ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ …
အမေ … … … …
…. …. …. ….. …
ဒီစာကို ရေးရတာ အင်မတန် ၀မ်းနည်းလှပါတယ်။
အမေ လွတ်မြောက်မယ့်နေ့ …
ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် … လှပနိုင်မယ့်နေ့
ပြည်သူ လူထုရဲ့ မျှော်လင့်ချက် …ပြည့်ဝလာမယ့်နေ့
ဘယ်တော့များမှ ရောက်ပါလိမ့်မလဲ …
မရဲတရဲ တွေးနေမိပါရဲ့ … ။
၁၉၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 3:41 AM6comments
ကိုချမ်းမြစိုး နှင့် ညီမလေးဂျစ်တူး ၏ တိုက်တွန်းချက်ဖြင့် ရေးသားပါသည်။
*** (အတိတ် - ၁)
အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်ဝမှာ ကြိမ်ခုံပုလေးနဲ့ ထိုင်ပြီး အပြင်ဘက်က မိုးစက်တွေကို တငေးတမော ကြည့်လို့နေခဲ့ဖူးတယ်။
မိုးစက်တွေက တည့်တည့်ကျတဲ့အခါကျ၊ ဘယ်ဘက်စောင်းစောင်း ကျတဲ့အခါ ကျ၊ ညဘက်စောင်းစောင်း ကျတဲ့အခါကျ၊ အဲဒီ မိုးစက်လေးတွေ သိပ်လှတယ်။
မိုးဖွဲဖွဲမှုန်မှုန်လေးတွေ မျက်နှာကို လာထိတဲ့အခါ …အေးမြမြ အတွေ့ကြောင့် သဘောတကျ ဖြစ်ခဲ့ရဖူးတယ်။
ညဘက် အိပ်နေရင်း မိုးတွေအရမ်းသဲသဲမဲမဲ ရွာလာရင် နိုးလာပြီး ကြောက်သလို လို အားငယ်သလိုလို အမေ့အနားကို တအားတိုးပြီး ဖက်အိပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
(အတိတ် - ၂)
ကျောင်းနေတဲ့ အရွယ်ရောက်တော့ …
ဖေဖေလာရင် အုန်းသီးခွဲစားမယ်” … ဆိုတဲ့သီချင်းကို အော်ဟစ်သီဆိုပြီး
တံစက်မြိတ် ရေတံလျှောက်က ကျလာတဲ့ မိုးရေတွေအောက်မှာ တကိုယ်လုံး အေးစက်ပြီး ခိုက်ခိုက်တုန်တဲ့ထိ မိုးရေတွေ ချိုးလို့ …ပျော်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန်မှာ မိုးကာကိုလုံအောင်ဝတ် မိုးရေခံ ဖော့ဖိနပ်နဲ့ ရေအိုင်တွေထဲ တဗွက်ဗွက်နင်းတော့ ရွှံ့စက်တွေ သဲမှုန်တွေက မိုးကာမည်းမည်း ရဲ့ နောက်မှာ ပေတူးလို့နေခဲ့ဖူးတယ်။
တခါတလေ အိမ်ခေါင်မိုးက မိုးယိုတဲ့အခါ ခွက်ကလေးတွေ လိုက်ခံထားပြီး ခွက်ထဲမိုးရေတွေ ပလောက် ပလောက်နဲ့ ကျတဲ့ အသံနဲ့ အိပ်စက်ခဲ့ရဖူးတယ်။
(အတိတ် - ၃)
မျက်ဝန်းထဲမှာ မိုးရွာပြီ ညို … ”
ဆိုတဲ့ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ရဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ စိတ်ကူးယဉ် လွမ်းမောခဲ့ ဖူးတယ်။ မိုးစက်တွေကြည့်ရင်း လွမ်းသလို ဆွေးသလို ရင်ဖိုစွာခံစားမိခဲ့တယ်။ မိုးသံတွေကြားမှာ စာအုပ်တအုပ်ဖတ်လို့ ငိုက်မျည်းအိပ်စက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဂစ်တာအိုကလေးတီးလို့ မညီမညာတဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုညည်း ခဲ့ဖူးတယ်။ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာထဲမှာပေါ့ … ။
အဲဒီအရွယ်ရဲ့ လက်တွေ့ဘ၀မှာတော့ …
ဘတ်စ်ကားစီးရတာ ပိုကြပ်တယ်။ ရေစိုစို လူတွေကြားမှာ ထီးရေစိုတွေနဲ့ ဟိုထိ ဒိထိ နေရခက်တာတွေ ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်။ လုံချည်အောက်အဖျား မိုးရေစိုစိုနဲ့ တနေကုန် ကျောင်းမှာနေဖန်များတော့ တခါတလေ မိုးကို စိတ်မရှည်တော့ဘူး။
တခါတလေတော့လည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ခဲ့ဖူးတယ်။
အင်းလျားကန်ဘောင်မှာ တယောက်ထဲလည်း မိုးရေထဲ ထိုင်နေခဲ့ဖူးတယ်။ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းတွေနဲ့ ပေါ့ကျတခွက် ရေနွေးတအိုး … မိုးသံတဖြောက်ဖြောက်နဲ့ ထိုင်သောက်ခဲ့ဖူးတယ်။
မိုးဖွဲဖွဲကျနေတဲ့နေ့တနေ့…မြေနီကုန်း ဗိုလ်မိုးလမ်းထိပ်က လမ်းဘေးထမင်းဆိုင် လေးမှာ တစုံတယောက်အတွက် (ဦး)ခင်ဝမ်းရေးပေး တဲ့ “မိုး” ဆိုတဲ့ ပန်းချီကား လေး ထိုင်ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။
(အတိတ် - ၄)
မိုးရေစိုစွတ်စွတ်နဲ့ အလုပ်သွားရတာ စိတ်ညစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မိုးသည်းသည်း ရွာတဲ့ တညနေ ကားလမ်းတွေ ရေကြီးနေတာနဲ့ ၅ နာရီခွဲ လွှတ်တဲ့အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ၈ နာရီ ထိုးလုပြီ။ ဘတ်စ်ကားက ရေလွတ်အောင် လှည့်မောင်းနေပြီး နောက်ဆုံး မောင်းမရတော့ ထိုးရပ်သွားလို့ ဒူးလောက် ရောက်နေတဲ့ ရေတွေထဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရွာနေတဲ့မိုးကို စိတ်မပျက်ပေမဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ ရေတွေနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားရတာ စိတ်ပျက်ခဲ့ဖူးတယ်။
မိုးဒေ၀ါနဲ့ တခါတလေ လွမ်းတယ်။
မိုးလေးဖွဲတော့ တခါတလေ သတိရတယ်။
မိုးရွာမယ်မထင်မိလို့ တခါတလေ ရှန်တဘက်လေး ခေါင်းမှာခြုံရတယ်။
မေမြို့မိုးလို တခါတလေ အစိုးမရ ဖြစ်မိတယ်။
ကိုမြကြီးရဲ့ မိုးလည်း တခါတလေ စွေဖြစ်တယ်။
မိုးဦးဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ တခါတလေ ရိုးမပေါ် ဖြတ်ပျံခဲ့တယ်။
မိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ စာတွေ ကဗျာတွေ အများကြီး ရေးခဲ့ဖူးတယ်။
မိုးတွေကတော့ ရွာနေဦးမှာပဲ …
သစ်ပင်ကလေးတွေ စိုပြေစေဖို့ …
အားလုံးရဲ့ ရှေ့မှောက် တူညီစွာကျရောက်လို့ပေါ့ .. ။
ဒါပေမဲ့ အားလုံးကတော့ …
တချို့က ပျော်မယ် …
တချို့က ပျင်းမယ် …
တချို့က လွမ်းမယ် …
တချို့ စိတ်ညစ်မယ် …
တချို့လည်း ဘယ်လိုမှ သဘောမထားဘူး …
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ သဘောထားထား …
ရွာနေဦးမှာပဲ မဟုတ်လား … ။
၁၈၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
၁၁ နာရီ ၄၅
ကျမရဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တဲ့ … မိုးနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ပြန်လည်စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပြန်လည်ပြီး ရေးစေလိုတဲ့ ဘလော့ မောင်နှမများ
(အားရင် … ဒါမှမဟုတ် … ခံစားချက်ရှိရင် …ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်)
Posted by မေဓာဝီ at 5:47 AM 8 comments
ဒီကနေ့ အဖေနေ့မို့ အဖေအကြောင်း မရေးဘူးလားဆိုပြီး ညီမလေးတွေက ကျမကို မေးကြတယ်။ အဖေ့အကြောင်းက ကျမရေးတဲ့စာ တော်တော် များများမှာ ပါနေကျမို့ ဒီနေ့မှ ထူးထူးခြားခြားရယ်လို့ မရေးချင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ “အဖေနေ့” မှ အဖေ့ကို သတိရရမှာလား … အဖေ့အကြောင်းရေးရမှာလား … လို့ ကျမ စိတ်ထဲ ကတ်သီးကတ်သပ်လည်း တွေးနေမိတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အဖေနေ့မှာ အဖေ့အကြောင်းရေးတော့ ပိုပြီး အမှတ်တရ ဖြစ်စေ တာပေါ့ … အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဖေနဲ့ ခွဲခွါနေရတဲ့သူတွေ … အဖေ့ကို မေ့လျော့ထားခဲ့မိသူတွေ … အဖေနဲ့ လူချင်း နီးနေပါလျက်နဲ့ စိတ်ချင်းဝေးနေ ကြသူတွေ … အဲဒီလိုလူတွေအတွက် “အဖေနေ့” ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကလေး တခုရှိနေတော့ မေ့လျောနေခဲ့မိရင်တောင် အမှတ်ရနိုင်တာပေါ့ … ဆိုပြီး ပြန်လည် တွေးခဲ့မိပါတယ်။
တကယ်တမ်း အဖေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမရေးမယ်ဆိုရင် ရေးစရာတွေက တပုံတပင်နဲ့ မကုန်နိုင်လောက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဖေနေ့မှရယ်မဟုတ် … ကြုံရင်ကြုံသလို အဖေ့အကြောင်းတွေ အဖေ့ဖန်တီးမှုတွေ ကျမ ရေးနေမိဦးမှာ ပါ။ ကျမဘလော့မှာ အဖေ့ကဗျာတွေကို အမှတ်တရဆိုပြီး တင်ခဲ့ပေါင်းလည်း များလှပါပြီ။ (တချို့ကတော့ လုပ်စားတယ်တဲ့ ပြောကြသေး)
ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ လုပ်စားတယ်ပဲဆိုဆို အဖေနေ့ အမှတ်တရပဲ ပြောပြော အဖေပြောတဲ့ ပုံပြင်ကလေးတပုဒ် တင်ချင်ပါတယ်။ ကဗျာပုံပြင် (၁) ကတင်ပြီးသားဆိုတော့ အခုတင်မှာက (၂)ပေါ့။ ဒီကဗျာပုံပြင်လေးက အဖေ့ မှတ်စုစာအုပ် အဟောင်းလေးထဲကပါပဲ။ အဲဒီပုံပြင်ကလေးကို အဖေက ကဗျာအဖြစ်လည်း ရေးထားပါတယ်။
တခါက ခြင်္သေ့အိုကြီးတကောင်ဟာ အားအင်ကုန်ခမ်းနေပြီ ဖြစ်လို့ အစာရှာ မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဂူထဲမှာပဲ လဲလျောင်းပြီး နာဖျားဟန်ဆောင်နေဖို့ပေါ့။
အဲဒီအခါမှာ တိရစ္ဆာန်ကလေးများဟာ ခြင်္သေ့နာကြီးပဲဆိုပြီး ဂူထဲကိုဝင်လာကြ သတဲ့။ ခြင်္သေ့ကြီးကလည်း ၀င်လာသမျှ သတ္တ၀ါတွေကို အလွယ်တကူ ဖမ်းယူ စားသောက်နေတော့တာပေါ့။
ဒီနည်းနဲ့ ၀မ်းရေးဖူလုံနေတုန်း တနေ့မှာ မြေခွေးတကောင်ဟာ ခြင်္သေ့ကြီးနေတဲ့ ဂူဝနား ရောက်လာတယ်။ သူဟာ အထဲကို မ၀င်သေးဘဲ ခြင်္သေ့ကြီးနဲ့ အလှမ်း ဝေးဝေးကနေ ရပ်ပြီး အကဲခပ် ကြည့်ရှုနေသတဲ့။
“ခက်လိုက်လေကွယ် … ဘာကြောင့် အဝေးကြီးမှာ ရပ်နေရသလဲ၊ အထဲကို ၀င်ခဲ့ပါတော့လား …” လို့ ခြင်္သေ့ကြီးက အားမလိုအားမရ မြေခွေးကို လှမ်းခေါ် လိုက်သတဲ့။
“ကျွန်တော် ၀င်ခဲ့ချင်ပါရဲ့ … ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ ခြေရာများဟာ ဂူထဲကို အ၀င်သာရှိပြီး အထွက်ခြေရာတော့ မရှိတာကြောင့် ခုလို မ၀င်ဘဲ နေရတာပေါ့” လို့ ဖြေပြီး ပြန်လှည့်ထွက်သွား သတဲ့ … ။ … ။
(ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ။ ကဗျာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။)
၀င်လာသမျှ ပွဲတော်တယ် (တည်)
“၀င်ချင်ပါရဲ့ … ကျုပ်မနော”
“ဟောဒီနားက ခြေရာတွေ …
မှတ်ပါသတိ … အမြဲရှိ ။ … ။
ဒီကဗျာပုံပြင်လေးတွေကို ၁၉၇၅ အောက်တိုဘာလတုန်းက အဖေရေးခဲ့တယ်လို့ ထိုးထားတဲ့ နေ့စွဲအရ သိရပါတယ်၊ မှတ်စုစာအုပ်ကလေးက အဲဒီတုန်းက အဖေ ဟိုမှတ်ဒီမှတ် မှတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကလေးပေါ့။
အဖေ့ကဗျာတွေ ပုံပြင်တွေ အဖြစ်အပျက် အမှတ်တရလေးတွေ တင်ခဲ့မိသမျှ ပြန်ရှာပြီး စုစည်းထားလိုက်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀-ကျော်က စာတစောင်
လှံ နဲ့ ဒိုင်း (သို့မဟုတ်) အဖေမေ့သွားသော ကဗျာတပုဒ်
၄၂ နှစ်တာ ခရီးမှသည် (အဖေနဲ့ အမေရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့)
story2(အဖေကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ကျမကိုပြန်ပြောပြတော့ ကျမက ၀တ္ထုတပုဒ် ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့တယ်)
၁၇၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
ညနေ ၅ နာရီ ၂၀ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 11:53 AM5comments
အမှောင်ကျသွားတယ် … ။
တိတ်ဆိတ်သွားတယ် … ။
တစုံတရာ လာထိသလား …
နှလုံးသားမှာ ထုံနေတယ် … ။
အိုဘယ့် … မိုးညလယ် … ။
ကဲ … ကွယ် …
သေချာစွာ ဆုံးဖြတ် …
မင်းရဲ့ သဘောကျပါပဲကွယ် … ။ … ။
၂၇၊ မေ၊ ၂၀၀၇
အဲဒီညကပေါ့ … ။
“အကောင်းဆုံးတွေက သင့်အတွက် ဖြစ်ပါစေ” တဲ့ … ။
“ဖြစ်သမျှကို အကောင်းစိတ်နဲ့ ခံယူနိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်” … လို့ ….
အကောင်းဆုံးက ကိုယ်နဲ့ တန်လို့လား။
အကောင်းဆုံးကိုလည်း မလိုချင် …
အကောင်းဆုံးကိုလည်း မမက်မော …
ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်သလောက် …
ရမှာပဲမဟုတ်လား … ။
(အဲဒီည - သန်းခေါင်ယံ)
သရုပ်ဖော်ပုံကို “ဒီနေရာမှ” ယူထားပါတယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 6:12 AM6comments
ဓာတ်ပုံပို့စ် တင်တဲ့သူတွေကို အားကျတာကြောင့် မနေ့က ရာသီဥတုကလည်း သာယာ၊ မီးကလည်းပျက်နေလို့ အားနေတာနဲ့ ဘုရားလည်းဖူးရင်း ဓာတ်ပုံ လည်းရိုက်ရင်း တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ဆိုသလို အိမ်ကထွက်ခဲ့တယ်။ ဝေးဝေးလံလံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ကနေ လမ်းလျှောက်ရင် နာရီဝက် အတွင်း ရောက်နိုင်တဲ့ ငါးထပ်ကြီးဘုရားကိုပါ။ ငါးထပ်ကြီးဘုရားသွားရတာ အင်မတန်စိတ်ချမ်းမြေ့လို့ တခါတလေ စိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အခါ စိတ်ပြေ လက်ပျောက် ရောက်ရောက်သွားဖြစ်တယ်။ ငါးထပ်ကြီးနဲ့ ခြောက်ထပ်ကြီးဟာ ကားလမ်းမကြီးတခုသာ ခြားပေမယ့် ငါးထပ်ကြီးဘုရားရဲ့ ၀န်းကျင်နဲ့ ရှုခင်းကို ပိုပြီး သဘောကျမိပါတယ်။
အိမ်ကအထွက်မှာ နေကျဲကျဲတောက် ပူနေတာနဲ့ ထီးကလေးယူလာမိတာ ကံကောင်းသွားတယ်။ သွားနေရင်း လမ်းတ၀က်အရောက် အနောက်ဘက် ကောင်းကင်ဆီမှာ မိုးတွေကညို့တက်လာပြီး ရာသီဥတုအခြေအနေ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားပုံများ နေကျဲကျဲပူရာက မိုးရိပ်တွေဆင်၊ မိုးသက်လေတွေ တိုက် တော့တာပါပဲ။ ဘုရားပရ၀ုဏ်ထဲ မရောက်ခင် မိုးစက်တွေ ဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက် ကျလာပါလေရော။
အရင်တုန်းက ဒီလမ်းလေးဟာ မြေနီလမ်းကလေးပေါ့။ ခုတော့ ကြွေပြား တွေခင်းလို့ သပ်သပ်ယပ်ယပ်ဖြစ်သွားပေမဲ့ တခါတလေတော့လည်း ဟိုအရင်က မြေနီလမ်းလေးကို လွမ်းမိသား။
မြတ်စွာဘုရား ရုပ်ပွားတော်ကို ဦးခိုက်ကန်တော့စဉ် …
သတ္တ၀ါတွေ ငြိမ်းချမ်းစေသား … ။
ဒီနဂါးကြီးပေါ့၊ ကျမ သိပ်သဘောကျခဲ့တာ။ ဘုရားရဲ့ ဘယ်ညာတဖက်တချက် မှာ နဂါးကြီး တကောင်စီရှိတယ်။ ဒီနဂါးကြီး ခံတွင်းဝက ရေတွေလွှတ်ပြီး ဘုရားကိုပူဇော်တာ ငယ်ငယ်တုန်းက မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီလို မြင်ကွင်းမျိုး မတွေ့ရတော့ဘူး။
ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနှင့် တပည့်သား သံဃာတော်များ။
မိုးတွေအရမ်းသည်းလာတာနဲ့ ခဏထိုင်နေတုန်း မိုးတွေကြားက ဘုံခုနစ်ဆင့် ကျောင်းတိုက်ကြီးကို အဝေးကလှမ်းပြီး မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။
မိုးနည်းနည်းစဲတော့မှ အောက်ကိုပြန်ဆင်းပြီး အဲဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကို သွားငေး လိုက်မိသေး။
ဒီရှေးဟောင်း ကျောင်းတိုက်ကြီးဟာ သူ့အနားက တော်တော်နဲ့ မခွါနိုင်အောင် ကျမကို စွဲဆောင်ထားတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျမတို့ ညီအစ်မတတွေ တိုင်ဦးတမ်း ကစားခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းရဲ့အောက်ခြေက အုတ်တိုင်လုံးကြီးတွေဆီ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ …
အိုးအိမ်မဲ့ သူတယောက်လေလား၊ အေးရာအေးကြောင်း ဘုရားရိပ် သံဃာရိပ်မှာ ခေတ္တခိုလှုံလာသူလား၊ ပူလောင်တဲ့ဝန်းကျင်ကို စွန့်ခွါတိမ်းရှောင်လာသူပဲလား၊ ဝေခွဲမရစွာ ကြည့်နေဆဲ … ။ သူကတော့ဖြင့် … နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျလို့။
ဆုတောင်းပြည့်စေတီ လို့ ကမ္ဗည်းထိုးထားတဲ့ မှန်စီရွှေချ စေတီငယ်လေး။
အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ပြန်ငေးကြည့်တော့ …ရေတွင်းငယ်ကလေး၊ စိမ်းစို အုပ်ဆိုင်း တဲ့ သစ်ပင်လေးတွေနဲ့ ကုန်းတော်ထက်က စေတီရဲ့ မြင်ကွင်းက ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်။
“သားတို့ကို ဓာတ်ပုံတပုံလောက် ရိုက်ပေးပါ”
ပူဆာလာကြတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ကြည်လင်ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးတွေရဲ့ အပြစ်ကင်းစင်သော အပြုံးနုနု လေးများ … ။
အိမ်ရောက်တော့ ညနေစောင်းနေပြီ။ မီးကတော့ မလာသေး။ အသိမပေးဘဲ အကြာကြီး ထွက်သွားလို့ အမေက မကြည်ဘူး။
ဓာတ်ပုံလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေက အကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ဘလော့မှာတင်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်ရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ အချိန်တွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ် ကို ကျေနပ်လို့ နေမိပါရဲ့။
၁၅၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
နံနက် ၉ နာရီ
(မနက်စောစောထဲက တင်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မီးကလည်း တနေကုန် ပျက်လိုက် လာလိုက်၊ ကွန်နက်ရှင်ကလည်း မကောင်းလို့ ခုမှ တင်လိုက်ရပါတယ်။)
ညနေ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 5:56 AM9comments
ပြိုဆင်းကျနေဆဲပေါ့ … ။
ခဲသားရောင် ပင်လယ်ကြီး …
အပြာရောင် ဖဲကြိုးတစ …
< < < < < < < < < < > > > > > > > > > >
ငြိမ်းချမ်းရေး ပေးပါ …
ဆည်းဆာမိုးသည်း … စိုရွှဲပါစေ …
ငှက်ကလေးများ ပျံသန်းနေကြလေရဲ့ …
ငြိမ်း ချမ်း စွာ နဲ့ လေ …. ။ ….. ။
၁၃ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 4:12 AM7comments
ဗိုလ်လုပ်လိုသလား (၁) ကို မေလ ၂၀-ရက် နေ့က ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီး တော်တော်ကြာ ရပ်နေခဲ့မိတယ်။ မနေ့က အခန်းပြောင်းရတာနဲ့ စာအုပ်စင်ရွှေ့တော့ ဒီစာအုပ် ကလေးတွေ့မှ ဆက်ပြီးတင်ရဦးမယ်လို့ ပြန်အမှတ်ရတာနဲ့ အပိုင်း (၂) ကို ဆက်လက် ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုပြူးကျယ်ထံပေးစာကိုတော့ နောက်တပတ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။
ဒီဆင်ကြီးဟာ (ဗိုလ်ဘဲ … ) စသည်ဖြင့် တိရစ္ဆာန်များပင်လျှင် ဗိုလ်ဘွဲ့ထူး ရှိကြကုန်၏။ …..
(အပိုင်း ၁- ကို ဒီမှာဆုံးခဲ့ပါတယ်။)
လောကမှာ လူတို့ကို အုပ်ချုပ်သောမင်းသည် လူအပေါင်းတို့ထက် သြဇာ အာဏာ ကြီးမြင့်ခြင်းကြောင့် ဗိုလ်ဟု ဆိုရ၏။ ထိုမင်းနှင့် စပ်သွယ်သော ရာထူး ရာခံ အစရှိသည်တို့သည် အဆင့်ဆင့် ဗိုလ်ဂုဏ်ထူး ရှိကြကုန်၏။ လောကုတ္တရာ ရေး၌ အရိယာတို့သည် အသီးသီး အဆင့်အတန်းအလိုက် ဗိုလ်ဂုဏ်ထူးရှိကြ ကုန်၏။ သောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပုထုဇဉ်တို့ထက် မြင့်မြတ်ကြီးကဲသော ကြောင့် ဗိုလ်ဟု ဆိုထိုက်ပေ၏။ သောတာပန်မှစ၍ အရိယာအပေါင်းတို့တွင် မြတ်စွာဘုရားသည် အကြီးဆုံးသော ဗိုလ်ဟု ဆိုရပေ၏။ မြတ်စွာဘုရား၌ အတုလ-ဟူသော ပုဒ်ကို ထောက်သဖြင့် မည်သူမှ ပြိုင်ဘက်မရှိအောင် အကြီး ဆုံးသော ဗိုလ်ကြီးဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပေ၏။
ဗိုလ်ဆိုသောနာမည်နှင့် ဗိုလ်ဘွဲ့ကို လူတိုင်း အလိုရှိကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့် လောက၌ ဗိုလ်လုပွဲများကို တွေ့မြင်ကြရကုန်၏။ ဗိုလ်ဆိုသော အမည်များကို အားလုံးနှစ်သက်ကြကုန်၏။ ဗိုလ်ဖြစ်လိုခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကိုရှာသော် ဗိုလ်ရဲ့ သုခကို ခံစားလို၍ပင် ဖြစ်ကြကုန်၏။ ထိုချမ်းသာတို့သည် ကာမချမ်းသာ-ရူပချမ်းသာ-အရူပချမ်းသာ-နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ဖြစ်ကြကုန်၏။ ချမ်းသာတို့တွင် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည် အားလုံးသော ချမ်းသာတို့ထက် မြင့်မြတ်ခြင်းကြောင့် ချမ်းသာဗိုလ်ကြီးဟု ဆိုရလေသည်။ (ဒါ့ကြောင့် နိဗ္ဗာနံ ပရမံ သုခံ) လို့ ဟောတော် မူပေသည်။
ဗိုလ်ဆိုသော နာမည်နှင့် ဗိုလ်ရဲ့သုခကို သတ္တ၀ါတိုင်း အလိုရှိကြသော်လည်း ဗိုလ်စိတ်နှင့် ဗိုလ်အလုပ်ကို မပြုလုပ်က မဖြစ်နိုင်ပေ။ အချို့သောသူတို့သည် ဗိုလ်အလုပ်နှင့် ဗိုလ်ချမ်းသာကို ပေါ့ပေါ့ကလေး စဉ်းစားပြီး ပြုလုပ်ကြရာ မိမိတို့ ထင်မြင်ချက်မကိုက်ဘဲ ချော်လွဲလိမ့်ကျလို့ နေကြသူများကိုလည်း တွေ့ကြုံကြဖူး လိမ့်မည်။
ဗိုလ်အဖြစ်နှင့် ၎င်း၏ချမ်းသာရဲ့ လက်သယ်ကိုရှာသော် “စိတ်” ဆိုသော သဘောကိုသာ တွေ့ရပေသည်။ စိတ်သည် သတ္တ၀ါတို့ကို ကြီးပွားအောင် နှင့် ယုတ်ညံ့အောင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ စိတ်သည် မြင့်မြတ်သောစိတ်- ယုတ်ညံ့သော စိတ် ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိရာ မြင့်မြတ်သောစိတ်နှင့် နေထိုင်သူသည် မြင့်မြတ်သော အဖြစ်သို့ ရောက်နိုင်ပေသည်။ ယုတ်ညံ့သော စိတ်နှင့် နေထိုင်သူသည် ယုတ်ညံ့ သော အဖြစ်သို့ ရောက်ရပေသည်။ အားလုံးသော ဆင်းရဲ-ချမ်းသာ ဂုဏ်ရှိ ဂုဏ်မဲ့ မညီမညွတ် ရှိနေပုံများသည် စိတ်ကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် …
စိတ္တေန နိယတေ လောကော၊
စိတ္တဿ ဧက ဓမ္မဿ၊
သဗ္ဗေ၀ ၀သ မနွဂူ။ … ။
စိတ်သည် လူအပေါင်းကို အလိုရှိရာသို့ ဆောင်ကြဉ်း၏။
စိတ်သည် လောကနေသူအပေါင်းကို ထက်ဝန်းကျင် အရပ် ဆယ်မျက်နှာသို့ ဆွဲငင်၏။
အလုံးစုံသော သတ္တ၀ါတို့သည် တခုသော စိတ်တရား၏ အလိုသို့ အစဉ်တစိုက် လိုက်ပါကြကုန်၏။
ဗိုလ်အဆင့်ဆင့်တို့သည် စိတ်ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေါ်ကြကုန်၏။ ဘုံနှင့်ဘ၀သို့ ရောက်ရှိမှုသည်လည်း ပြောခဲ့သည် စိတ်ကြောင့်ပင် ဖြစ်ကြကုန်၏။ ဗိုလ်အဖြစ် နှင့် ဗိုလ်ချမ်းသာကို အလိုရှိသောသူတို့သည် ဗိုလ်စိတ်နှင့် ဗိုလ်အလုပ်ကို ပြုလုပ်ကြရပေသည်။ ဗိုလ်စိတ်ကင်းမဲ့သော သူများသည် ဗိုလ်မဖြစ်နိုင်။ ဒါကြောင့် ….
ဗိုလ်လုပ်လိုသော သူများသည် ဗိုလ်စိတ်နှင့် ဗိုလ်အလုပ်ကို ရှေးဦးစွာ သိထားရမည်။
ဒီတပတ်တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ခဏရပ်နားလိုက်ပါဦးမယ်။ နောက်တခေါက် တင်တဲ့အခါမှ ဗိုလ်စိတ်နဲ့ ဗိုလ်အလုပ်အကြောင်းကို ဆက်ဖော်ပြပါတော့မယ်။
၁၃၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၇
နံနက် ၉ နာရီ ၅၀
Posted by မေဓာဝီ at 4:24 AM2comments
အရက်ကိုစွဲလမ်းပြီး ညဘက်အရက်အလွန်အကျွံ သောက်တဲ့သူများ မနက် မိုးလင်းရင် ခေါင်းတွေအုံ မကြည်မလင်ဖြစ် နေထိုင်မကောင်းသလို ခံစားရ အဲဒါကို အရက်နာကျတယ်လို့ ခေါ်သတဲ့။
တစုံတယောက်ကို စွဲလမ်းပြီး ထိုသူနဲ့ ခွဲခွါရတဲ့အခါ ချစ်လျက်နဲ့ ခွဲခွဲ မုန်းလျက်နဲ့ ခွဲခွဲ ရင်ထဲမှာ တနင့်နင့် ခံစားရတဲ့အခါ လွမ်းနာကျတယ်လို့ ဆိုသတဲ့။
ကျမ ဘလော့နာကျတာကတော့ဖြင့် အရက်နာကျတာနဲ့ လွမ်းနာကျတာ နှစ်ခုပေါင်း ပြီး ခံစားနေရသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘလော့ကိုစွဲလမ်းပြီး နေ့လည်း ဘလော့၊ ညလည်း ဘလော့၊ အိပ်မက်ထဲလည်း ဘလော့၊ လမ်းသွားရင်းလည်း ဘလော့ .. အဲဒီလို ဖြစ်နေပြီး ဘလော့ကို အလွန်အကျွံစားသုံးမိနေသလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် စာတင်ပြီးတာနဲ့ ဟိုလူ့ဘလော့ ဒီလူ့ဘလော့ သွားဖတ် သွားကြည့် ဆီဗုံးတွေထဲ အော်လိုအော်၊ ကွန်မန့်တွေ ရေးလိုရေး … ဘလော့ကို အချိန်ပေးရပုံများ … အလုပ်တာဝန်, အိမ်မှုကိစ္စ လစ်ဟင်းလို လစ်ဟင်းပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ညညဆို ဘလော့အတွက် စာတပုဒ်ရေးပြီးမှ အိပ်တဲ့အကျင့်က ဖြစ်နေပြီး လူခြေတိတ်ချိန် အနှောက်အယှက်ကင်းချိန်မှ စာရေးရတော့ ညဘက် အိပ်ရေးပျက်ပေါင်းလည်းများလှပြီ။ မနက်လည်း နောက်ကျမှထလို့ မဖြစ်တော့ မထချင်ထချင် ပျင်းပျင်းနဲ့ ထရတာမို့ မနက်တိုင်း အိပ်ရာကနိုးရင် ခေါင်းတွေက ကြည်ကြည်လင်လင်မရှိ၊ အုံတုံတုံ ကိုက်တိုက်တိုက် ဘလော့ကိုက်တယ်လို့ ခေါ်ရမလားမသိ။ ဘလော့ကိုက်တဲ့ ရက်ပေါင်းများလာတော့ အရက်နာကျတဲ့ လူလို … ဘလော့နာကျပါလေရောလား။
တခါတလေများ အကြောင်းမညီညွတ်လို့ စာမရေးဖြစ်တဲ့အခါ၊ စာမတင်ဖြစ်တဲ့ အခါ၊ ဘလော့တွေကို မဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုး ဆိုရင်တော့ နေမထိ ထိုင်မထိနဲ့ ဘာလိုနေမှန်းမသိ ဟာတိဟာတာနဲ့ ခံစားနေရ ပြန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့မှာ ကွန်မန့်လေးတွေ ၀င်နေမလား၊ မ၀င်ဘူးလား။ ကိုယ်ဖတ်နေကျ သူတွေရဲ့ ဘလော့မှာ ဘာအသစ်တွေတင်ထားသလဲ။ ဖတ်စရာ မှတ်စရာ ခံစားစရာ လေ့လာစရာ … အသစ်အဆန်းလေးတွေ …. တမနက်လောက် မမြင်ရတာနဲ့ကို စိတ်ထဲ သိပ်မကောင်းလှဘူး။
အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာကြာလာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိတယ်။ ဘလော့ကို ဘာကြောင့် ရေးနေရတာလဲ … ဘလော့တွေကို ဘာကြောင့်များ ဖတ်နေရတာလဲ။ ဘလော့ဟာ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘယ်လောက်များ အရေးပါ နေပါသလဲ … လို့ တွေးမိပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဖတ်နေရတာလဲ … ဖတ်ချင်လို့ဖတ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ … ကျမ မဖြေတတ်ပါဘူး။
ဒါနဲ့ အငြိမ်မနေနိုင်လို့ ဆက်တွေးမိပါသေးတယ်။
ဘလော့သည် မိမိအတွက်လား … ။
ဘလော့သည် သူတပါးအတွက်လား … ။
ဘလော့သည် ဘလော့အတွက်လား … ။
ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆို ဒိုင်ယာရီပဲ ရေးမှာပေါ့။
ဒါဆို ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ဘူးလား။
ဒီလိုလဲမဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဒါလေးရေးနေရတာ ကိုယ့်စိတ်သာယာမှု တခုပေပဲလေ။
အဲဒီလိုပဲ သူတပါးအတွက်ချည်းပဲလို့လည်း ပြောလို့မရပြန်ဘူး။ ကိုယ်ရေးချင် တာတွေလည်း ရေးနေတာမဟုတ်လား။
ဒီလိုဆို …ယေဘုယျအားဖြင့် ဘလော့သည် ဘလော့အတွက်ဆိုရင်ရော။
အင်း … ကျမ မသိတော့ပါဘူး။
ဘာသည် ဘာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့စရေးတဲ့ ၂၀၀၆ သြဂုတ်လကုန် လောက်ကနေ ဒီကနေ့ထိ နေ့တိုင်းလိုလို ကျမ စိတ်ထဲမှာ ဘလော့သာ အမြဲ လွှမ်းမိုးနေမိတာပါပဲ။ တခါတလေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း စိတ်အေးလက်အေး နေလို ပေမဲ့ နေလို့လည်း မရခဲ့ပါဘူး။ ဘလော့ကပေးတဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်တွေ လည်း ခံနေရတာမို့ အခုအချိန်မှာ ကျမ ဘလော့နာကျနေပါပြီ။ ဘလော့နာ ကျနေတဲ့ ကျမ ဘလော့ကိုမုန်းသွားပြီ၊ စိတ်နာသွားပြီ၊ မကြည့်ချင် မဖတ်ချင် လောက်အောင် ဖြစ်နေပြီလား …. ။ ဘလော့လောကကြီးကို ကျောခိုင်းလိုက် တော့မလား။ ဘလော့ရေးတာကို စွန့်လွှတ်လိုက် တော့ မလား …. ။
အရက်နာကျသူတွေဟာ ပြန်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ မနက်ခင်းမှာ တခွက်တဖလား ထပ် သောက်ကြတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
အင်း …. ဘလော့နာကျနေတဲ့ ကျမလည်း ….
အချိန်ကလေးရတာနဲ့ ကွန်ပျူတာ အမြန်ဖွင့် ….
IE ရဲ့ address bar မှာ http://www.blogger.com/ ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး …
Username – abcdefg@gmail.com
Password – bla bla bla
Sign In ကလေးကို ကလစ်နှိပ်မိလိုက်ပါတော့တယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 11:02 AM 11 comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:07 AM 10 comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:58 AM5comments